Ololaha balaadhinta Mövenpick Hotels & Resorts 'Saxaraha ka hooseeya Sahara Afrika ayaa kordhay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Ololaha balaadhinta Mövenpick Hotels & Resorts 'Saxaraha ka hooseeya Sahara Afrika ayaa kordhay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Cote d'Ivoire • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Hantida soo socota ee dhagaxii ugu horreeyay waxaa la dhigay Sabtidii (Oktoobar 7) waxaana la shaaciyay taariikhda furitaanka 2020 xaflad lagu sheegay dardargelinta qorshooyinka horumarineed ee shirkadda martigelinta ee Switzerland ee gobolka Saxaraha ka hooseeya.
Mövenpick Hotel Abidjan wuxuu noqon doonaa hantida ugu horeysa ee shirkaddu ku leedahay Côte d'Ivoire waana mid ka mid ah afarta shirkadood ee hadda ku jira horumarka firfircoon ee gobolka. Saddexda kale waa Mövenpick Hotel & Residences Nairobi ee dalka Kenya, kaas oo ku socda wadadii uu ku furmi lahaa 2018, Mövenpick Hotel Addis Ababa ee Ethiopia oo lagu wado inuu furmo 2019 iyo Mövenpick Hotel & Conference Center Abuja ee Nigeria oo la qorsheynayo in la dhameystiro sanadka 2020. Hoteelada Mövenpick & Dalxiisyadu hadda waxay ka shaqeeyaan hanti 260-muhiim u ah Ghana - Mövenpick Ambassador Hotel Accra.
Andrew Langdon, oo ah Madaxa Horumarinta ee Mövenpick Hotels & Resorts ayaa yiri "Markii aan bilawnay shaqada dhismaha Mövenpick Hotel Abidjan, waxaan qaadeynaa talaabo kale oo aan ugu dhowaanayno inaan xaqiijino qorshayaasheena hamiga leh ee ku aadan balaarinta gobolka Saxaraha hoose."
Furitaanka hudheel hab nololeed casri ah oo ku yaal xarunta ganacsiga iyo bangiyada ee Côte d'Ivoire waa tallaabo istiraatiiji ah oo aan ka faa'iideysanaynin caannimada sii kordheysa ee Abidjan oo ah xarun ganacsi oo weyn, laakiin xoojineysa joogitaanka Mövenpick Hotels & Resorts 'ee Galbeedka Afrika. Tani waxay muhiim u tahay istiraatiijiyadeena horumarinta maadaama aan si firfircoon u raadineyno fursado aan ku kobcinno faylalka ay ka kooban tahay oo aan u noqonno shirkad hormuud u ah martigelinta gobolka.
Hoteelka Mövenpick Abidjan wuxuu kuyaala badhtamaha magaalada ganacsiga ee Le Plateau, oo ay kuyaalaan dhismayaal dawladeed iyo astaamo maxalli ah sida St. Paul Cathedral iyo Banco National Park.
Markii la dhammaystiro sannadka 2020, hantidu waxay soo bandhigi doontaa makhaayad laga cunteeyo maalintii oo dhan; qolka fadhiga / baarka; Fadhiga Naadiga Fulinta; xarun jimicsi oo casri ah iyo goob kulan oo casri ah.
"Hoteelka si wanaagsan ayaa loo dhigi doonaa si loo fududeeyo howlaha ganacsiga, ganacsiga la xiriira dowladda iyo guud ahaan ganacsiga ganacsiga," ayuu yiri Langdon.
Mövenpick Hotel Abidjan lahaanshihiisu waa iskaashi u dhexeeya Société Abidjanese de Promotion Industrilles et Immobilières (SAPRIM), oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo iska leh dhismaha xafiiska iyo suuqa ku dhow guriga, iyo shirkad caan ah oo dhismaha ka shaqeysa oo la yiraahdo Bouygues Batiment International.